Umbiko Wonyaka Wezokuvakasha waseKenya Ukhombisa Ithemba Elisha
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Kenya » Umbiko Wonyaka Wezokuvakasha waseKenya Ukhombisa Ithemba Elisha
I-10 min ifunde
UNobhala Wezokuvakasha waseKenya, uNajib Balala, ubehola izwe lakhe ezikhathini ezingenakwenzeka kakhulu kule minyaka emithathu edlule. Nokho, kungase kube khona ukukhanya ekugcineni komhubhe, futhi iKenya iyasabela.
Ngemuva kokuphela okunzima kuka-2020, ezokuvakasha zomhlaba zabhekana nezingqinamba ngonyaka ka-2021 njengoba amazwe aqinisa imingcele yokuhamba ephendula ukuqubuka kwegciwane elisha.
UMhlonishwa. U-Najib Balala akazange aphele amandla. Uklonyeliswe ngesihloko esithi a IQhawe Lezokuvakasha by Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba, wenza lokho okungenziwa umholi weqiniso - akazange awulahle umkhumbi.
Ngezikhathi zobunzima, imboni yezokuvakasha neyokuvakasha yama ngenxa yokusabalala kobhubhane lwe-COVID-19, futhi uBalala wabonakala njengophawu lokukhuthaza e-Afrika nangale kwayo.
Ngonyaka odlule, uNobhala Wezokuvakasha waseKenya, u-HE Najib Balala, wabonwa noNgqongqoshe Wezokuvakasha wase-Saudi Arabia, uMhlonishwa u-Ahmed Al Khateeb, kanye noNgqongqoshe Wezokuvakasha wase-Jamaica, u-HE Edmund Bartlett. I-Kenya ibimemele izithunywa engqungqutheleni Ukubuyiselwa Kwezokuvakasha Kwase-Afrika okuholela ku-Saudi Arabian Initiative yamazwe ahamba phambili kwezokuvakasha. IKenya ingelinye lamalungu asungula le Iqembu lamazwe ayi-10 elinentshisekelo yezokuvakasha eliholwa yiSaudia Arabia kanye neJamaica, iSpain, nezinye.
Ngenkomba ekhulayo yethemba kanye nemakethe entsha engase ibe khona, umbiko waseKenya osanda kukhishwa wezi-2021 mayelana Nesimo Semboni Yezokuvakasha Nezokuvakasha kuleli zwe elisempumalanga ne-Afrika ngamathuba amasha kanye nezinombolo zokufika ezikhula kancane.
Ekupheleni kukaSepthemba 2021, abavakashi bamazwe ngamazwe abafika emhlabeni wonke babephansi ngo-20% kunesikhathi esifanayo ngo-2020, kanye nama-76% ngaphansi kwamazinga ka-2019 (i-UNWTO barometer 2021). AmaMelika aqopha imiphumela eqine kakhulu ezinyangeni eziyi-9 zokuqala zika-2021, abafike bakhuphuke ngo-1% uma kuqhathaniswa no-2020 kodwa bese bengama-65% ngaphansi kwamazinga ka-2019.
I-Europe ibone ukwehla okungu-8% uma kuqhathaniswa no-2020, okungama-69% ngaphansi kuka-2019. E-Asia nasePacific, abafikayo bebengama-95% ngaphansi kwamazinga ka-2019 njengoba izindawo eziningi eziya kuzo zahlala zivaliwe ekuhambeni okungabalulekile. I-Afrika kanye ne-Middle East ziqophe ukwehla ngo-77% kanye no-82% ngokulandelanayo uma kuqhathaniswa no-2019.
Ukufika eKenya bevela emazweni ase-Afrika bekumi kanje:
I-Uganda - 80,067
I-Tanzania - 74,051
ENigeria - 25,399
I-Rwanda - 24,665
I-Ethiopia - 21,424
INingizimu Sudan - 19,892
INingizimu Afrika - 18,520
I-DRC - 15,731
I-Burundi - 13,792
Ukufika eKenya bevela emazweni aseMelika:
I-USA - 136,981
ECanada - 13,373
IBrazil - 1,208
I-Colombia - 917
I-Argentina - 323
IJamaica - 308
eChile - 299
Ukufika eKenya kusuka e-Asia:
I-India - 42,159
I-China - 31,610
IJapan - 2,081
I-S.Korea - 2,052
ESri Lanka - 2,022
Philipines - 1,774
I-Bagladesh - 1,235
I-Nepal - 604
Ukufika eKenya kusuka eYurophu:
IsiJalimane - 27,620
I-France - 18,772
ENetherlands - 12,928
I-Italy - 12,207
ISpain - 10,482
ISweden - 10,107
ISwitzerland - 6,535
I-Belgium - 5,697
Ukufika eKenya kusuka eMpumalanga Ephakathi:
Kwa-Israyeli - 2,572
ISaudi Arabia - 1,521
I-UAE - 853
I-Qatar - 198
Ukufika eKenya kusuka e-Oceania
I-Australia - 3,376
I-New Zealand - 640
IFiji - 128
IPapua Guinea - 19
I-Vanuatu - 10
Kwakuyini isizathu sokuthi izivakashi zifike eKenya ngo-2021:
Iholide / Iholide/ Ezokuvakasha: 34.44%
Abavakashi Abangane: 29.57%
Ibhizinisi Nemihlangano (amaMICE): 26.40%
Inhloso yokuvakasha ngesifunda
PI-assenger Landings: 2019 uma kuqhathaniswa no-2020
Ngo-2020, imali engenile ezokuvakasha yayingama-US$780,054,000. Ngo-2021, imali etholwayo ikhuphuke yafinyelela ku-$1,290,495,840.
Ukukhuphuka kwaqala ngokusobala kwikota yesi-4 ka-2020 futhi yonke ikota yenyuka ngo-2021 ngemuva kokwehla ngekota yesi-3 ka-2020.
Kusukela ngoJanuwari kuya kuSepthemba 2021, ukuhlaliswa kwemibhede kukhuphuke kwafinyelela inani eliyizi-4,138,821 uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngo-2020 (2,575,812) okurekhoda ukululama okungama-60.7%.
Kusukela ngoJanuwari kuya kuSepthemba 2021, ukukhula okuhle kwamakamelo ubusuku obungu-3,084,957 kubonwe uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngo-2020 (1,986,465) okubonisa ukukhula ngo-55.3%.
Ubusuku bokulala basekhaya bukhule ngo-101.3% phakathi kuka-2020 no-2021, kanti ubusuku bokulala bamazwe ngamazwe bukhule ngo-0.05%. Lezi zindlela zokuthola kabusha ukulala ebusuku ziyinkomba yokuthi umkhakha wezokuvakasha eKenya usekelwe kakhulu uhambo lwasekhaya ngo-2021.
Imizamo eyeseka ukubuyiswa komkhakha wezokuvakasha waseKenya ngo-2021
Imikhankaso yasekhaya - Kenya: Inanitosha, #Stay-at-home-traveltomorrow ngokweseka ucingo lwe-UNWTO.
Imikhankaso yamazwe ngamazwe – Ubambiswano ne-Expedia neQatar Airways, Lastminute.com, imikhankaso yokukhuthaza uhwebo e-UK naseNyakatho Melika, kanye nohambo lomndeni.
IKenya isingathe iMagical Kenya Open, i-WRC, iSafari Rally, neWorld Athletics enabahlanganyeli abangaphansi kwama-20.
I-Kenya iphinde yabamba iqhaza kuWorld Travel Market Africa eKapa, ​​iMagical Kenya Travel Expo, kanye ne-ITB ebonakalayo.
Ukuthola inzuzo ekongiweni kwezilwane zasendle kufaka phakathi ukuqala kweMagical Kenya Tembo Naming Festival kanye nokufaka uphawu lwendiza ye-KQ enezinhlobo eziwuphawu.
Amaphrojekthi wengqalasizinda ahlanganisa ukuvuselelwa kwesitimela saseNairobi - eNanyuki naseNairobi - Kisumu, ukwanda kwamafrikhwensi e-SGR nezindawo zokuvakasha ezidala amaphakheji amasha, ukunwetshwa kwemigwaqo ezweni lonke, nokulungiswa kwengqalasizinda yesikhumulo sezindiza.
Izinyathelo zomkhakha kanye nokuqanjwa okusha kufaka phakathi izindiza ezintsha zasekhaya kanye nokwethulwa kwemizila emisha yendiza, indawo yokuhlala, nezindawo zezinkomfa ezithuthukisa izimiso ezingokomlingo zaseKenya, imihlangano eyingxube, amaphakheji, namanani ukuhlangabezana nezidingo zomhambi omusha wasekhaya.
I-New Vision Strategy ye-Kenya Tourism Tourism iqale ngekota yesithathu ka-2021.
UMnyango Wezokuvakasha Nezilwane Zasendle waseKenya ubumatasa kwezokuphepha kwezilwane zasendle, uvimbela izinombolo zokubulawa kwezindlovu nobhejane ukuba zikhuphuke.
Umnyango ubona ukuqhubeka kokululama kancane komkhakha wezokuvakasha nezokuvakasha ngonyaka ka-2022, ulindele ukuthi amarisidi angenayo nabafikayo bakhule phakathi kuka-10-20% ukusuka ngo-2021.
UMnyango uncoma lokhu okulandelayo ukuze kuqinisekiswe ukukhula okuqhubekayo kwemakethe yezivakashi nokusebenzisa amathuba amasha.
Nweba futhi wenze imboni yezokundiza yaseKenya ibe yesimanjemanje. I-JKIA (Isikhumulo Sezindiza saseNairobi) idinga indawo yesimanje yamazwe ngamazwe eletha ulwazi lwamakhasimende olusebenza kahle nobungane.
Kunesidingo esiphuthumayo sokwandisa Isikhumulo Sezindiza Ukunda neMalindi.
Esinye isincomo ukwakhiwa kwesikhungo esisha somhlangano esinamandla esimanjemanje futhi anele.
I-Kenya iphinde ibone izimakethe zezokuvakasha ezingasetshenzisiwe.
Izimakethe phambilini ebezingabekwa ezingeni eliphezulu zinethuba lokukhula kakhulu. Lezi zimakethe zezokuvakasha ezingena ngaphakathi zifaka iFrance, iSweden, iPoland, iMexico, i-Israel, i-Iran, i-Australia, iSwitzerland, iNetherlands, neBelgium.
Ulwazi olwengeziwe mayelana nezokuvakasha eKenya lungatholakala kuwebhusayithi ye Ibhodi Lezokuvakasha laseKenya.
Africa Americas Asia Covid-19 I-Expedia umkhosi Kenya Kisumu Malindi Emaphakathi Mpumalanga Nairobi UNajib Balala Qatar safari I-Saudi Arabia I-Saudia Sudan Ezokuvakasha Ukunda Izilwane zasendle
IZanzibar izosingatha iNgqungquthela Ebalulekile Yokuhlonyiswa Kwabesifazane Kwabase-Afrika
Imakethe Yezempilo Yokuziphatha izofakaza Ukwehla Kwentengiso e...
I-LGBTQ+ Italian Tour Operators Iyaphuma
I-World Tourism Network Ishayele Ihlombe I-UNWTO Inxusa Lokuthula...
I-High Protein Yogurt Market 2022 Abadlali Ababalulekile, i-SWOT...
Izwe laseRussia lisongela amazwe aseNtshonalanga 'angenabungane'...
I-China Eastern Airlines isekela umkhumbi wayo we-Boeing 737
Icala lokuqala lenkawu kwa-Israel libikwe ngemuva...